Boss အားဖြင့် 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် 1960 မော်ဒယ်, CD-17 "ဟုဦးဘို" Petersson - စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင် | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
Boss အားဖြင့် 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် 1960 မော်ဒယ်, CD-17 "ဟုဦးဘို" Petersson - စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
ကတင်ပြ ttravis on နေရောင်, 10 / 28 / 2018 - 21: 14
ဘိုကဒီ site ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးကစတင်ဖွင့်ကတည်းကငါ့ကိုအတိတ် 13 နှစ်ကျော်သွားဒီ site ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အကာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
တင်သွင်း ပဲ့ချိတ်-လှေ-မော်တော်-ပြုပြင်ခြင်း Facebook ကစာမျက်နှာနိုဝင်ဘာလ 1, 2009 ။
1960 5.5 HP ကဂျွန်ဆင်, CD-17 အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အဆိုင်
site ကိုကို၎င်း, Tune-Up ကိုဆောင်းပါးများကို။
Mech ။ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာ, ငါလောင်စာထိုးနှင့်အတူ 38 နှစ်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်
ပစ္စည်းကိရိယာများ (Bosch ရဲ့) ဆွီဒင်, ဆိုလိုသည်မှာ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောင်းအားနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအတွက်လျှောက်လွှာ
လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်သီအိုရီနှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်ခြင်း, သို့သော်, ယခုတိုင်အောင်ငါနီးပါးသာရှိ
နောက်ဆုံးကျဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ 4'rowing လှေများအတွက် 6-14 မြင်းကောင်ရေပဲ့ချိတ်အဘို့ကြော်ငြာ။
တဦးတည်းအဖြေကိုရယူခြင်း, ငါတို့နှင့်ငါတို့ကျွန်းပေါ်မှာဂျွန်ဆင် Seahorse 5.5hp ဝယ်ယူ
စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်အပြင်ဘက်ဘောလ်တစ်ပင်လယ်တွင်။ အဆိုပါအင်ဂျင်လှည့်နိုင်, ဒီတော့ငါမေးသော်
အဲဒါကို run ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကို။ "ဟုတ်တယ်, အခြို့နှစ်နှစ်အကြာ" ဟုသူကပြန်ပြောသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဝယ်
55 $ ဘို့။
ငယ်ဂျွန်ဆင်ခဲ့သည့် serial number B ကို 17, အတူ CD1960 (9716) ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ Tune-Up ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုံမှန်ထက် ကျော်လွန်. တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ထွက်လှည့်။
အိမ်မှာကျွန်တော်ဆလင်ဒါခေါင်းကိုဒါကိုတော့နှင့်အတူ "mended", ထိုတိုင်ကီထဲမှာ 80% ရေတွေ့ရှိခဲ့
ဆီလီကွန်တွေအများကြီး, ကြောင့်ဖမ်းရန် (ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆေးသုတ်) အပူလွန်ကဲလက္ခဏာ
အပူထိန်းကိရိယာ။ ထို့ကြောင့်အင်ဂျင်က "သင်ျခြိုငျး" ကိုကအရမ်းနီးကပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမီးပွားပလပ်,
သို့သော်မဟုတ်ဘဲအသစ်အခဲ့ကြသည်နှင့်အကောင်းတစ်ဦးမျက်နှာရှိ၏, ဒါကြောင့်ငါက "မစ်ရှင်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ပထမဦးဆုံးအရာဦးခေါင်းက, အက်လီထွင်းဖေါက်မှာ, ငယ်လေးတစ်နှင့်အတူ fixed ခဲ့သည်
အလူမီနီပြွန်, နှင့်အနီးအနားရှိဆံပင်ပါးလွှာတဲ့ရေဂျာကင်အင်္ကျီအက်ကွဲ "အမြဲတမ်း" LocTite နှင့်အတူထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖန်ဖိုင်ဘာ၏တစ်ဦးအားဖြည့်ပလပ်စတစ်ဖြည့်
(ပလတ်စတစ် Padding) စစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံး။
ကင်းပဲ့ချိတ်ယူခြင်း, ခြောက်လ (တစ်ဆယ်၏) ဆလင်ဒါသော့ခလောက်နှင့် (ခုနစျပါး၏) တဦးတည်း
အဆိုပါပါဝါခေါင်း partition ကိုများနှင့်အောက်ပိုင်းယူနစ်အတွက်သော့ခလောက်ဖဲ့။ တောင်မှနှင့်အတူ
အရည်အသွေး။ အဆိုပါပြဿနာ 8,5mm ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏တူးခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်, သူတို့ချည်ဖို့
M10 ချည်-bits အတူ။ ¼ "UNC မှချည်နှင့်အတူ M10 ပေါင်းလိုက်သောချောင်း၏ဖြတ်တောက်မှုခဲ့ကြသည်
, ဖြည့်စွက် "အမြဲတမ်း" LocTite နှင့်အတူ fixed ။
ဟုဆိုသည်အတိုင်း, လှုံ့ဆျောထွက်ဝတ်ဆင်သည်, ကပ်လေ၏။ အဆိုပါလှုံ့ဆျောအိုးအိမ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်သကဲ့သို့
ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် cavitated, ဒီဧရိယာ, smoothened ပြည့်စေပြီးမှ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်
ဖန်ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ် Padding ဖြည့်နှင့်အတူ
ကတော့ float ပန်းကန်ကိုဖကျြဆီးခဲ့သညျ။ ငါသည်ငါ့ခုံအသစ်တစ်ခုကြေးဝါကိုဆေးထိုးအပ်ကို လုပ်. , တစ်ဦး
ကြေးဝါစစ်ကတော့ float ပန်းကန်များအတွက်ထည့်သွင်း။
နယူး gaskets (ဦးခေါင်း, မော်တော်ကားရှတ်, အပူထိန်းကိရိယာ), အပူထိန်းကိရိယာ, လှုံ့ဆျော, ကွိုင်,
ငွေ့ရည်ဖွဲ့, မှတ်, (ဆက်ပြောသည်ပလပ်စတစ်ကတော့ float နှင့်အတူ) carburetor ကိရိယာအစုံသစ်ကိုလောင်စာလိုင်းများ,
မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများနှင့်ဦးထုပ်, installed ခဲ့ကြသည်။ စကားမစပ်ငါစွန်ခံရှေးခယျြခဲ့
ထုတ်သည်။ သူတို့ကိုငါထွက်ဘွားမြင်လေ၏ငါမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောချည်မှာ LocTite / Permatex Form ကို-a-Gasket အသုံးပြုသောနှင့်ရေမှာ
အားလုံးအလုပ်ကဒီပဲ့ချိတ်ချောမွေ့ပြေးပြီးနောက်အတော်လေး, idles, ပထမဦးဆုံးပေါ်စတင်သည်နှင့်,
ရှေ့ဦးစွာ မှစ. မရည်ရွယ်ပေမယ့်, ကခြယ်သစ်ကိုကြီးကဖြစ်သကဲ့သို့ကြည့်
ပြပွဲအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေလက်ျာဘက်ထွက်လာမယ့်။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် 400 $ နှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်
ဒီ restore အောင်၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းငါ့ကိုအပြည့်အဝလျော်ကြေးပေးတော်မူပြီနဲ့
သူ # 28 အဆိုပါပဲ့ချိတ်ပန်းချီကားမတိုင်မီကြည့်ရှုပုံကိုပြသသည်။
#8,5 ပေါ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် M48 နှင့်အတူအသွားအလာမတိုင်မီ, #10 အဆိုပါ 49mm ထွင်းဖေါက်တူး။ # 34 အပေါ်မြင်နိုင်သကဲ့သို့, တွင်ခုံလုပ်ခဲ့ပြီးသော¼ "UNC မှချည်နဲ့ပေါင်းလိုက်သောလှံတံကိုထည့်ပါ။
အနီးအနားမှာပိုက်နှင့်အတူပြုပြင်ကြခေါင်းတုံးကိုဘှားမွငျတ #42 အတွက်ထည့်သွင်း။ Cavitations နှင့် "ပလတ်စတစ် Padding" #43 နှင့်အတူထွက်ပေါက်မှာတည်ဆောက်ကြလော့။
အဆိုပါ H ကို / S ကိုဆေးထိုးအပ် #45 နှင့် #47 ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်နေသည်။
ရုပ်ပုံတွင်သော့ခတ်ဝက်အူအဘို့အပေါင်းလိုက်သောထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့်ကန်တော့ချွန်ယင်းအုပ်စုခွဲမချခင်, အတန်ငယ်ရှည်လျားသောသစ် H ကို / S ကိုဆေးထိုးအပ် #44 ။ ပန်းကန်လုံးထဲတွင် Threaded ကြေးဝါကိုထည့်သွင်း၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဟောင်းကိုဖော့ဆို့ float မဟုတ်ဘဲကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အစပိုင်းတွင် shellac သုံးခုအလွှာနှင့်အတူ lacquered ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အစားပုံမှန်၏ alkylat ဓာတ်ဆီအသုံးပြုသောကြောင့် OK ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရာသီပြီးနောက်, ငါ'94 ပလပ်စတစ်ကတော့ float မှပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစျေးသက်သက်သာသာစံဓာတ်ဆီနှင့်အတူ run နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပူးတွဲပုံများ, မြေယာနှင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိမ်းရောင် 5.5' လှေလှော်လှေပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားအပေါ်မှာငါ့ပွနျလညျထူထောငျဂျွန်ဆင် Seahorse 14 မြင်းကောင်ရေပြသထားတယ်အစောပိုင်း'70-ies ကနေ "JOFA" ကလုပ်အမျိုးအစား "Siljan" ။ 400 $ များအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ချုံးချုံးကျသွားတယ်အဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကံကြမ္မာတစ်လေဖြတ်သကဲ့သို့ "JOFA" "Johnson Fabriker" (စက်ရုံများ) ကိုဆိုလိုတာပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ OMC နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေခဲဟော်ကီခမောက်နှင့်အခြားပလပ်စတစ်နှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများအောင်များအတွက်လူသိများသည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ငါပဲ့ချိတ်ကိုင်တွယ်ရန်သေးငယ်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားကိုအသုံးပြုပါ။ paint သက်ဆိုင်ရာ primer အပေါ်မှုန်ရေမွှားသံဗူးကနေ (Audi 90 အဖြူ) နီးပါးကိုမူလဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်အဖုံးပေါ်တွင်အနက်ရောင်အစင်းပြည်မှဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်ပျက်ကွက်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အင်ဂျင်အဖုံးအပေါ်, ငါသည် #27 အပေါ်မျက်နှာကိုပန်းကန်န်းကျင်အဟောင်းကိုရော်ဘာ frames များကိုစွန့်ပစ်။
ငါမဟုတ်ဘဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်သစ်ကိုသူမြားကိုရှာပါ။ တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်အမျှသူငယ်ချင်းအချို့ကပြောသည် - " ... ဒီပဲ့ချိတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကြည့်" ... !
#8 ပေါ်တွင်တွေ့မြင်သကဲ့သို့ငါ၏ခမ်းနားသားရှမွေလသည် (78) ဤနေရာတွင်ကဲ့သို့၎င်း, မိမိညီအစ်ကို Hampus (5) နဲ့အသေးလေ့လာရေးခရီးအောင်အကြီးပျော်စရာရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့နည်းနည်းတံတား #5 ပင်လယ်အော်, "Mysingen" ကိုထွက်ရှာနေပေါ်မှာထိုင်ပါ၏။ အဆိုပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အစားကြီးမား 20x45 ကီလိုမီတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းOrnöမှာစတင်ကဘောလ်တစ်ပင်လယ် (0.7% ဆား) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘောလ်တစ်ဝေးပိုကြီးတဲ့, 1300x 400 ကီလိုမီတာအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျွန်းနီးပါး 25.000 ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ကျွန်းများပါဝင်သည်သောစတော့ဟုမ်းကျွန်းစုတွင်အကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်း, ပါ!
ငါအများအပြားဓါတ်ပုံတွေကိုစေလွှတ်ပြီ, သင်ကြိုက်သလောက်သင်သည်ထိုသူတို့သုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင်နှင့်အတူဒီအဆက်အသွယ်စတင်ရန်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့မြျှောလ, သင်ပုံကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ် ...
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဘို၏ဗီဒီယိုနှင့်သူ၏လှေ & မော်တော်
ကတင်ပြ Fischer 04: 16 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 21 / 54 အပေါ်
ဤနေရာတွင် Wisconsin ပြည်နယ် USA တွင်တူညီသောယူနစ် restore ပြန်ခဲ့။ သင့်ရဲ့ post ကိုနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံခံစားပါ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။